Toamasina : mampiahiahy ny fakana an-keriny an’i Nourbhay Sefoudine | NewsMada
Toamasina : mampiahiahy ny fakana an-keriny an’i Nourbhay Sefoudine
Niteraka ahiahy teo amin’ny mpanara-baovao ny momba ny fakana an-keriny an’i Nourbhay Sefoudine, tao Bazaribe Toamasina, ny zoma lasa teo. Nandritra ny fivoriana nataon’ireo polisy tao amin’ny boriborintany faharoan’ny polisy ao Mangarano no nitranga ity fakana an-keriny ity…
Fantatra fa voasambotry ny polisy ny olona miisa dimy indray aloha hatreto ny asabotsy tolakandro teo tao amin’ny trano fandraisam-bahiny iray tsy lavitra ny biraon’ny prefet ao Mangarano Toamasina. Voarohirohy ho isan’ireo tompon’antoka tamin’ny fakana an-keriny an’i Nourbhay Sefoudine izy ireo. Voalazan’ny loharanom-baovao iray marim-pototra aza fa hoe nisy mpitandro filaminana iray avy aty an-dRenivohitra koa voasambotra niaraka tamin’izy ireo, saingy navotsotra izy araka ny fanazavana voaray. Fantatra fa iantefan’ny ahiahin’ny mpitandro filaminana izany hoe ny tompon’ilay fiara ny Renault Express nampiasain’ireo jiolahy nandritra ny fakana an-keriny ity teratany karana ity.
Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao hatrany ny fiovan’ny fomba fiasa tampoka teo anivon’ny polisim-pirenena tao Toamasina izay nanatanteraka fivoriambe niaraka tao Mangarano, ny zoma tamin’ny 6 ora sy 30 mn hariva. Vokany, tsy nisy niasa ireo polisy mpanao fisafoana manerana ny tanàna ao Toamasina sy mpanao sakana ary mpandrindra fifamoivoizana. Teo am-panaovana ity fivoriana ity anefa ny polisim-pirenena tao Toamasina no nahazo loharanom-baovao momba ity fakana an-keriny ity. Rava tampoka, araka izany, ny fivoriana niarahan’ny polisim-pirenena ao Toamasina. Lasa nifanenjika tamin’ireo jiolahy avy hatrany ny polisy taorian’izay ka nahita ilay fiara nampiasain’ireo jiolahy narian’ireo olon-dratsy tao Anjoma. Raha nanontaniana momba ireo olona dimy voasambotra kosa ny polisy misahana ny heloka bevava, nanambara fa mbola ao anatin’ny fanadihadiana ka tsy afaka nanome ny mombamomba ireo olona voarohirohy ireo.